Baby Car Seat - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကလေးကို ကားနှငျ့ အပွငျဘယျလိုချေါသှားမလဲ?
မိဘဆိုတာ ရငျသှေးလေးတှကေို အကောငျးဆုံးထကျပိုတာကိုသာ ပေးခငျြကွသူခညျြးသာ၊
အစားအစာဆိုလညျး ဘေးကငျးဖို့၊ သှားလာရငျလညျး ထိခိုကျမှုမရှိစဖေို့ အစစ အရာရာကွိုတငျတှေးတော ပူပငျတတျကွသညျ ဒါဆို သှားလာတဲ့ အခြိနျ ဘေးကငျးစဖေို့ မမေတေို့အတှကျ အသုံးဝငျနိုငျမယျ့ ပစ်စညျးလေးတဈမြိုး အကွောငျး ဗဟုသုတ မြှဝေ ခငျြပါတယျ
အရငျဆုံး ကလေးကားစီးခုံ ရဲ့ကောငျးကြိုးလေးတှေ ပွောပွခငျြပါတယျ
ယနခေ့တျေဟာ သှားလာလှုပျရှားမြားတဲ့ခတျေမို့ ကလေးကို ကားပျေါတငျကာ သှားလာကွရပါတယျ။ ကလေးကို လူကွီးမြားလို မစီးစဘေဲကားစီးခုံနှငျ့ စီးစခွေငျးဟာ တကယျလို့ ယဉျမတျောတဆ အန်တရာယျ ဖွဈပှား၍ ထိခိုကျခွငျးမှ ၉၀% ခနျ့ကာကှယျပေးပါတယျ။ အဓိက အားဖွငျ့ ကလေးရဲ့ နုနယျတဲ့ ခေါငျး၊လညျပငျးတို့ကို ထိခိုကျခွငျးမရှိအောငျ ကာကှယျပေးထားလို့ပါ။
ကလေးကားစီးခုံလေးတှကေို ဝယျမယျဆိုရငျ အခကျြ (၄) ခကျြထညျ့စဉျးစားသငျ့ပါတယျ။
(၁) ကလေး ခွထေောကျ နှဈခြောငျးသှငျးရနျ သိုငျွးကျုးပါရဲ့လား?
(၂) ပခုံးသိုငျးကွိုး နှဈခုပါရဲ့လား? သိုငျးကွိုးက အတငျးအလြှော့လုပျနိုငျရဲ့လား?
(၃) ကိုယျ့ကားနှငျ့ ကလေးထိုငျခုံ အံဝငျခှငျကြ ဖွဈပါရဲ့လား?
(၄) ခါးကို တဈပတျပတျလို့ရသော ခါးပတျကွိုးပါ ပါရဲ့လား?
ကလေး ကားစီးခုံ နှငျ့ သတိပွုဖှယျမြား
(၁) ကလေးကားစီးခုံ ကို ကလေးအသကျ ၂ နှဈအောကျတှငျ ကား၏ နောကျမှနျဘကျသို့လှညျ့ထားခွငျးက မတျောတဆ ထိခိုကျမှုဖွဈလြှငျ ထိခိုကျနိုငျခြေ ၃ ဆခနျ့လြှော့နညျးစပေါသညျ
(၂) ကလေးကားစီးခုံကို သခြော အံဝငျခှငျကြ ဖွဈစမှေသာ ကာကှယျမှုပေးနိုငျပါတယျ
(၃) ကလေးကားစီးခုံ မဝယျခငျမှာ တပျဆငျပုံ ကို သခြောဖတျပွီးမှသာ ဝယျသငျ့ပါတယျ
(၄) ကလေး အသကျအရှယျ ၅ နှဈအောကျသာလြှငျ ကားစီးခုံ သုံးသငျ့ပွီး ကလေး အသကျ ၁၀နှဈကြျောလြှငျ လူကွီးထိုငျခုံတှငျ ခါးပတျပတျ၍ စီးသငျ့ပါသညျ
ကလေးအားလုံးအန်တရာယျ ကငျးစရေနျ ရညျရှယျလြှကျ
မယျတငျ ( ဆေး _ ၁)
ကလေးကို ကားနှင့် အပြင်ဘယ်လိုခေါ်သွားမလဲ?
မိဘဆိုတာ ရင်သွေးလေးတွေကို အကောင်းဆုံးထက်ပိုတာကိုသာ ပေးချင်ကြသူချည်းသာ၊
အစားအစာဆိုလည်း ဘေးကင်းဖို့၊ သွားလာရင်လည်း ထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့ အစစ အရာရာကြိုတင်တွေးတော ပူပင်တတ်ကြသည် ဒါဆို သွားလာတဲ့ အချိန် ဘေးကင်းစေဖို့ မေမေတို့အတွက် အသုံးဝင်နိုင်မယ့် ပစ္စည်းလေးတစ်မျိုး အကြောင်း ဗဟုသုတ မျှဝေ ချင်ပါတယ်
အရင်ဆုံး ကလေးကားစီးခုံ ရဲ့ကောင်းကျိုးလေးတွေ ပြောပြချင်ပါတယ်
ယနေ့ခေတ်ဟာ သွားလာလှုပ်ရှားများတဲ့ခေတ်မို့ ကလေးကို ကားပေါ်တင်ကာ သွားလာကြရပါတယ်။ ကလေးကို လူကြီးများလို မစီးစေဘဲကားစီးခုံနှင့် စီးစေခြင်းဟာ တကယ်လို့ ယဉ်မတော်တဆ အန္တရာယ် ဖြစ်ပွား၍ ထိခိုက်ခြင်းမှ ၉၀% ခန့်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အဓိက အားဖြင့် ကလေးရဲ့ နုနယ်တဲ့ ခေါင်း၊လည်ပင်းတို့ကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိအောင် ကာကွယ်ပေးထားလို့ပါ။
ကလေးကားစီးခုံလေးတွေကို ဝယ်မယ်ဆိုရင် အချက် (၄) ချက်ထည့်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
(၁) ကလေး ခြေထောက် နှစ်ချောင်းသွင်းရန် သိုင်းကြ်ုးပါရဲ့လား?
(၂) ပခုံးသိုင်းကြိုး နှစ်ခုပါရဲ့လား? သိုင်းကြိုးက အတင်းအလျှော့လုပ်နိုင်ရဲ့လား?
(၃) ကိုယ့်ကားနှင့် ကလေးထိုင်ခုံ အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်ပါရဲ့လား?
(၄) ခါးကို တစ်ပတ်ပတ်လို့ရသော ခါးပတ်ကြိုးပါ ပါရဲ့လား?
ကလေး ကားစီးခုံ နှင့် သတိပြုဖွယ်များ
(၁) ကလေးကားစီးခုံ ကို ကလေးအသက် ၂ နှစ်အောက်တွင် ကား၏ နောက်မှန်ဘက်သို့လှည့်ထားခြင်းက မတော်တဆ ထိခိုက်မှုဖြစ်လျှင် ထိခိုက်နိုင်ချေ ၃ ဆခန့်လျှော့နည်းစေပါသည်
(၂) ကလေးကားစီးခုံကို သေချာ အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်စေမှသာ ကာကွယ်မှုပေးနိုင်ပါတယ်
(၃) ကလေးကားစီးခုံ မဝယ်ခင်မှာ တပ်ဆင်ပုံ ကို သေချာဖတ်ပြီးမှသာ ဝယ်သင့်ပါတယ်
(၄) ကလေး အသက်အရွယ် ၅ နှစ်အောက်သာလျှင် ကားစီးခုံ သုံးသင့်ပြီး ကလေး အသက် ၁၀နှစ်ကျော်လျှင် လူကြီးထိုင်ခုံတွင် ခါးပတ်ပတ်၍ စီးသင့်ပါသည်
ကလေးအားလုံးအန္တရာယ် ကင်းစေရန် ရည်ရွယ်လျှက်
မယ်တင် ( ဆေး _ ၁)